Netizen Report : Manjavona ireo Somaiso Mampifanolana any Kiobà · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Oktobra 2016 3:29 GMT
“Tsy misy dikany ny aterineto ! ‘ndeha ho jerena… izay rehetra mila aterineto, atsangano ny tànana.” Sariitatra nataon'i Lázaro Saavedra, nampiasaina rehefa nahazoana alàlana.
Manome topi-maso iraisam-pirenena momba ireo fanamby, ny fandresena ary ireo fironana vao mipoitra momba ny zon'ny aterineto maneran-tany ny tatitry ny mpisera (Netizen Report) an'ny Global Voices Advocacy.
Ananan'ireo mpanao gazety kiobàna ny porofo fa arahan'ny governemanta Kiobàna akaiky sy fantenany ireo hafatra somaiso amin'ny finday mifototra amin'ny tenifototra toy ny hoe “zon'olombelona”, “fitokonana tsy misakafo”, ny “fifidianana” ary “fiarovam-panjakana”. Tsy tonga any amin'izay andefasana azy ireo hafatra ahitàna ireo karazana tenifototra saropady toy ny anaran'ireo mpikatroka mafana fo sangany amin'ny fanoherana an'i Castro, araka ny tatitra nataon'ny mpanao gazety Yoani Sánchez sy Reinaldo Escobar, izay mpitantana ny haino aman-jery mpanome vaovao 14ymedio any La Havane. Nefa dia mbola voasoratra ho toy ny “lasa’ ilay hafatra any amin'ny findain'ny mpandefa.
Fara-fahakeliny 30 no tenifototra fantatra fa miteraka ny fanakànana ny rafitra, hoy ilay mpahay teknolojia mpanohitra sady mpitoraka bilaogy Eliécer Avila. Tsy mbola fantatra mazava ny fe-potoana nametrahana azy io. Tsy mbola naparitak'ireo mpanao gazety ny lisitra fenon'ireo teny voasedra, ary tsy nolazain'izy ireo raha inoan-dry zareo fa mpampiasa voatokana no kendren'izany fanakànana izany. Samy olona fanta-bahoaka mitondra ny tenin'ny mpanohitra i Sánchez, Escobar sy i Avila.
Tamin'ny fotoana nahamafy ny fanarahamaso niaretan'ireo Kiobàna mpitoraka bilaogy sy ireo mpanao gazety tsy miankina no nahitàna izany, ary tamin'ny trangan-javatra sasany aza dia nomelohan'ny mpitarika ny governemanta sy ireo mpitarika ny antoko kaominista kiobàna imasom-bahoaka. Voaroaka tamin'ny asany tao amin'ny radiom-panjakàna Sagua ilay mpanoratra ao amin'ny Dairo de Cuba, Maykel González Vivero, izay mpiaro ny zon'ny LGBT ao amin'ny nosy ihany koa, roa herinanadro lasa izay, noho ny niarahany niasa taminà “haino aman-jery tsy miankina”. Tamin'ny faran'ny volana Aogositra, nomelohan'ny filoha lefitry ny Sendikàn'ny mpiasan'ny Gazety Kiobàna am-pahibemaso tao amin'ny fahitalavitra, sady nampangaina ho nanàla baràka ny fihevitry ny “Kiobàna matotra” ilay orogoaiana mpitoraka bilaogy tsara orina sady mpanao gazety taloha tao amin'ny BBC, Fernando Ravsberg, izay efa nonina tany Kiobà hatramin'ny tapaky ny taona 1990 sady any ny fianakaviany.
Gadrain'ny manampahefana Rosiana ny mpilalao satria manafintohina ireo mpivavaka, Pokemon-style
Any am-ponja i Ruslan Sokolovsky nanomboka tamin'ny fiandohan'ny volana Aogositra noho ny nilalaovany Pokemon Go tao anatin'ny Katedraly Ortodoksa Rosiana iray sy nandefasany ny lahatsary momba izany tao amin'ny Youtube. Nanaovan’ny mpitandro filaminana fanadihadiana ilay mpitoraka bilaoginà lahatsary noho ny nanaovany fihetsika tafahoatra, nanafintohina ireo mpivavaka sady “nanitsakitsaka ny zo hivavaka ao an-trano fiangonana” . Raha toa ka voaheloka amin'ireo vesatra ireo i Sokolovsky, dia mety ho voatàna any am-ponja mandritra ny dimy taona. ‘Hita’ 1,3 tapitrisa mahery no voaangon'ilay lahatsary (misy fanazavàna amin'ny teny anglisy amin'izao fotoana izao) tao amin'ny Youtube.
Tamin'ny 7 Septambra, nitaraina i Sokolovsky fa rahonan'ilay mpitsabo ny marary saina ao am-ponja ny ainy, ampiomaniny fa mety hidiny any amin'ny toerana izay ” tsy azon'ny mpisolovava hidirana.” Nambaran'ireo mpanao fanadihadiana ihany koa fa nahitàna penina fakàntsary tany an-tranony – teknolojia izay tsy ara-dalàna any Rosia. “Penina mpitsikilo” no ilazan'ny haino aman-jery ilay fitaovana, mameno ireo fiampangan'ireo mpitoraka bilaogy mpomba ny governemanta fa ny hafanàn-pon'i Sokolovsky tsy mino an'Andriamanitra ety anaty aterineto sy amin'ny haino aman-jery dia ao anatin'ilay fanentanana lehibe, arindran'ny herin'ireo ratsy fanahy natao mba handemena ireo soatoavina nentim-paharazana Rosiana.
Tazonin'ny fitsaràna alzeriana ny fanamelohana ilay mpikatroka tao amin'ny rohin'ny Charlie Hebdo
Notazonin'ny fitsaràna antampony Alzeriana ny fanamelohana ilay mpikatroka, Slimane Bouhafs, nahena ho telo taona ny saziny dimy taona an-tranomaizina. Voasazy dimy taona an-tranomaizina sy handoa lamandy 100.000 dinara Alzeriana i Bouhafs tamin'ny voalohany noho ny ” faniratsiràna ny Mpaminany” sy “fanambaniana ny finoana ary ny fitsipika Silamo” tamin'ny fametrahana rohy mankany amin'ilay sariitatra tao amin'ny gazetiboky mahatsikaiky Frantsay Charlie Hebdo mampiseho ny Mpaminany Muhammad mitomany.
Mpanao gazety amin'ny aterineto nosamborina tany Venezoelà
Nosamborin'ny manampahefana Venezoeliana noho ny fiampangàna azy ho manao famotsiambola i Braulio Jatar, shiliana-venezoaliana mpanao gazety sady mpisolovava . Voasambotra nandritra ny hetsi-panoherana tao amin'ny Villa Rosa izay nanerena ny Filoha Nicolas Maduro handao ny tanàna i Jatar, izay talen'ny tranonkalam-baovao mpanao fanadihadiana Reporte Confidencial. Inoan'ireo mpomba an'i Jatar fa ny fandrakofany ilay hetsi-panoherana no tena antony hitazonana azy.
Tantaran'ny herim-pamoretana any Tiorkia
Miara-miasa amin'ny Komity mpiaro ny mpanao gazety ilay mpanao gazety tiorka Özgür Öğret mba hamoaka tatitra isan-kerinandro atao hoe ” tantaran'ny famoretana any Tiorkia”, itantaràna ny fandrahonana ataon'ny governemanta am-perinasa amin'ireo mpanao gazety nomerika sy nentim-paharazana mitatitra ny resaka momba ny politika, ny herisetra ary ny kolikoly any tiorkia. Vakio eto ny voasoratra tamin'ity herinandro ity.
Tsy ahitàna an'i Kashmir ny ” India Nomerika”-n'i Narendra Modi
Nosakanan'ny governemanta Indiana ny fidirana amin’ny aterineto amin'ny finday any Kashmir, izay miady amin'ny fidirana aterineto amin'ny maha-zo fototra maha-olona azy. Nakaton'ny fanjakana, efa ho roa volana lasa izay, ny aterineto amin'ny finday, rehefa nirongatra ny hetsi-panoherana taorian'ny namonoan'ny tafika indiana ilay mpitolona mpitarika ny fisintahana, tamin'ny fiandohan'ny volana jolay. Namela ny ankamaroan'ny olona any Kashmir, izay miantehitra amin'ny aterineto amin'ny finday hidirana amin'ny tranonkala, ho “be fanahiana sy mitoka-monina” ny fanapahana ny tambajotran'ny aterineto amin'ny finday, araka ny soratr'ilay mpanao gazety Hasit Shah : ” Sarotra ho an'ny mpanao gazety ny hitatitra ny zava-misy. Tsy ampy ny vaovao tena ilaina. Niverina any amin'ny vanim-potoana talohan'ny nomerika i Kashmir any India”.
Sakanan'i Arabia Saodita ilay fampiasa fandefasana hafatra LINE
Nampian'ny governemanta Sodiana ny LINE ilay lisitra lavaben'ireo tolotra VolP sy ny fampiasa fandefasana hafatra nosakanana, izay efa misy ny Viber, WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram ary Skype. “Inona fotsiny no ananana aterineto? ”, hoy ny fanontaniana napetrak'ireo Saodiana mpisera tamin'ny fampiasana Twitter mba hanoherana ny politika henjan'ny governemanta momba ny sivana amin'ny aterineto.
Mahagaga, mahavariana : manambara fomba fanarahana maso mahavariana kokoa ny fiporitsahana vaovaon'i Snowden
Namoaka tahirin-kevitra vaovao ny Intercept, avy tamin'ny fiporitsahan'ny Snowden izay milaza ny fomba nandraisan'ny NSA anjara tamin'ireo ” asa fisamborana sy famonoana be dia be” nanerana ny Afovoany Atsinanana sy Afrika Avaratra, tamin'ny fampiasana ny teknolojia matanjaky ny asa fitsikilovana izay mety haangona angon-drakitra maherin'ny 300 tapitrisa avy amin'ireo mailaka sy antso an-telefaonina isan'andro”.
Fanontaniana Misy Faintraikany Be sy Ireo Azo Atao ho an'ny Hetsika sy Fikarohana momba ny Fanaovana Antsojay ety anaty Aterineto (Angl) – Nate Matias, Ivontoerana MIT ho an'ny haino aman-jerin'ny olom-pirenena
Ny Lainga Goavana Ao Amin'ny Aterineto : Tsy Firaharahiana Ny Politikan'ny Tsiambaratelo Sy Ny Politikan'ny Tolotra iasan'ny Tolotra fametrahana Tambajotra Sosialy (Angl) – Jonathan Obar sy Anne Oeldorf-Hirsch
Fanaraha-Maso Amin'ny Aterineto : Volavolanà Fepetra sy Fanadihadiana aminà tranonkala1 tapitrisa : 11 Jolay 2016 (Angl) – Steven Englehardt sy Arvind Narayanan
Fandriho amin'ny mailaka ny Tatitry ny Mpisera Amin'ny Aterineto
Afef Abrougui, Ellery Roberts Biddle, Weiping Li, James Losey ary Sarah Myers West dia samy niara-niasa tamin'ity tatitra ity.